Amathiphu Wokubona Uqobo lukaDkt Martens Shoes From Imitations | Bezzia
Kuhlala kwenzeka ngemikhiqizo emikhulu: lapho kuphumelela ngokwengeziwe, imibhalo engumbombayi eyengeziwe. Ngisho nakwezinye izingxenye zomhlaba kunezimakethe ezifanayo ezibekelwe ukukopela. Kwenzeka ngemidondoshiya efana noNike noma uReebok futhi, ngezinga elincane, ngezicathulo zikaDkt Martens.
Izicathulo ezidumile zohlobo lomkhiqizo, eziqinile futhi ezinemihwamuko ewugqinsi futhi eqinile, ziphinda zenziwe ngomqondo wokungaziwa. Kwezinye izimo lawa ngamakhophi amabi kakhulu kepha kokunye okuphindaphindwayo kucishe kufane.
Kulungile,Ungahlukanisa kanjani uDkt Martens mbumbulu kweqiniso? Okokuqala, khumbula ubuchwepheshe bomoya obukhethekile bokuphela kwalezi zicathulo bese ubheka ukuthi iluphu ye-AirWair ikhona yini ematheni, ngemuva, endaweni yesithende.
Kumakhophi wekhwalithi empofu, umkhiqizo uvame ukupelwa kabi, ngaphakathi kwezicathulo nakumalebula. Bheka amaphutha wesipelingi.
Ungakwazi futhi hlola ukuthungwa kwezicathulo: UDkt Martens wangempela unemithungo ephuzi ngezansi.
Uma unomoya womphenyi ungavula ngisho izicathulo futhi hlola izifanekiso. Okwangempela kuyisporty futhi kunokuhlangana ukuze kuzuzwe ukubuyela okungcono lapho uhamba. Okokugcina, ungabheka ukuthi kukhona isiphambano nesitembu sophawu lomkhiqizo ngaphansi kwesihlangu.
Futhi uma ufuna nokwazi ukuthi ngabe zakhiwe e-United Kingdom noma e-Asia (lapho okwangempela kwaqala ukwenziwa khona kusuka ngo-2002) ungabheka ohlangothini lwesicathulo ngoba uma benophawu oluphrintiwe yilokho bavela e-Asia kanti abanye bathi "Made in England"
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izicathulo » Amaqhinga okuhlukanisa izicathulo zangempela zikaDkt Martens kuma-knockoffs
Isinyathelo-by-step updo sezinwele eziphakathi